खाली पेटमा खानै नहुने चीजहरू, यी १० खानेकुरा खाली पेटमा खाए गम्भिर असर गर्ने - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
खाली पेटमा खानै नहुने चीजहरू, यी १० खानेकुरा खाली पेटमा खाए गम्भिर असर गर्ने
२०७८ भाद्र, ७ सोमवार
शरीर र स्वाथ्य दुबैका लागि खाना आवश्यक छ । खाना नै शरीरको सम्पूर्ण उर्जा र प्राणको स्रोत हुन् । हामी स्वस्थ रहने कि रोगी यो कुरा हाम्रो खानपानमा निर्भर रहन्छ । भनिन्छ, हामी जस्तो खान्छौं त्यस्तै हुन्छौं ।
कस्तो खाना ? कति खाना ? कुन समयमा के खाने के नखाने जस्ता ज्ञान भने हुनुपर्छ नत्र स्वास्थ्यवर्द्धक भनिएका कुराहरु पनि समय र अवस्थाको ख्याल नगरी खाएका उल्टै स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँने हुन सक्छन् ।
खाना खादा समय र अवस्थाको पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ हामीले त्यस्तै खानेकुराहरुको सूचि बनाएका छौँ जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाकारी नै छन् तर समयको सम्बन्धमा होस नपुर्याए स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछन् । यसैले तपाईले पनि यी खानेकुराहरु खाली पेटमा खाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बानीमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
ग्रीन टि : हामीहरु शरीरको बोसो घटाउन, ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्न बिहानै ग्रीन टि पिउने गर्छौं । तर ग्रीन टिमा हुने कैफिनले शरीरमा एसिडको मात्रालाई बढाउँछ । एउटा समस्याबाट मुक्त हुन पिउने त्यही ग्रीन टि खालि पेटमा सेवन गर्दा एसिडिटी बढ्छ । र, पाचनक्रियामा समस्या ल्याएर अरु नयाँ समस्या उत्पन्न गराउँछ ।
चिया : चियामा पनि एसिडको मात्रा निक्कै नै धेरै हुन्छ । त्यसैले खालि पेटमा चियाको सेवनले पेट पोल्ने र दुख्ने समस्या हुन्छ भने अल्सर हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।
दुध : प्राय सबैलाई थाहा छ, दुधमा स्याचुरेटेड फ्याट ९चिल्लो पदार्थ ० र प्रोटीन हुन्छ । खाली पेटमा दुध सेवन गर्नाले पेटको मांशपेसीलाई कमजोर पार्छ । यसकारण दुधलाई खाली पेटमा सेवन गर्यो भने पाचनक्रियामा समस्या देखिनुको साथै यसले कफ पनि बढाउँछ ।
चिनी : त्यसै पनि चिनीलाई ‘व्हाइट एण्ड स्वीट पोइजन’ भन्ने गरिन्छ । खालि पेटमा चिनी सेवन गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ । चिनी खाँदा शरीरलाई आवश्यक पर्ने उर्जा र शक्ति त प्राप्त हुन्छ तर यसको मात्रामा वृद्धि हुदैँजादा यसले थकान पनि बढ्छ ।
सफ्ट ड्रिंक्स (कोल्ड ड्रिंक्स) : सफ्ट ड्रिंक्सहरुमा कार्बोनेट एसिडको मात्रा अधिक हुन्छ । यसले शरीरमा एसिडको मात्रा बढाउँछ । त्यसपछि छाती पोल्ने, पेट पोल्ने समस्या देखापर्छ । एसिडिटीको समस्या बढ्छ र साथसाथै छटपटी पनि हुन सक्छ ।
टमाटर : खालि पेटमा टमाटर सेवन गर्दा यसमा हुने एसिडले एक प्रकारको जेल पैदा गर्छ र अन्ततः पथरीको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
खर्बुजा : खर्बुजामा भिटामिन, आइरन, म्याग्नेसियम, र पोटासीयमको मात्रा निक्कै धेरै हुन्छ । शरीरको लागि अति आवश्यक यी तत्वहरु खाली पेटमा पुगे भने चाहिं एसिडिटीको समस्या आउछ । साथसाथै पाचनक्रियामा पनि समस्या आउँछ । अझ पानी खाने बित्तिकै खर्बुजा खानु र खर्बुजा खाए लगत्तै पानी खानु त झन् हानिकारक हुन्छ । यदि त्यसो गरियो भने पखाला लाग्ने निश्चित छ ।
केरा : केरामा म्यागनेसियम एकदमै धेरै हुन्छ । त्यसैले खालि पेटमा केरा खायो भने शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ । जसले गर्दा छाती पोल्ने र पाचनक्रियामा समेत गडबडी आउने हुन्छ ।
सुन्तला : सुन्तलामा अर्गानिक एसिड हुन्छ । पेट खाली भएको बेला शरीरमा त्यतिकै पनि एसिड (अम्ल) को मात्र धेरै हुन्छ । त्यसमाथि खाली पेटमा सुन्तला खायो भने यसले एसिडको मात्रा अत्याधिक बढाउँछ । बैज्ञानिक अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने पेटमा एसिड धेरै हुँदा छाती र पेट पोल्ने तथा पथरीको समस्या समेत आउने हुन्छ ।
सखरखण्ड : सखरखण्डमा टैनिन र पैकटिन जस्ता पदार्थ हुन्छन् । गम जस्तो यो पदार्थलाई खाली पेटले पचाउन सक्दैन । परिणाम स्वरूप छाती पोल्ने समस्या देखापर्छ ।
सुत्ने बेला कुन दिशामा सिरानी बनाउँदा राम्रो ? शास्त्रिय र बैज्ञानिक अर्थ के छ ?
पसिना गन्हाउने समस्या छ ? यस समस्याबाट मुक्त हुन यसो गर्नुस्
के तपाईँको खुट्टा गन्हाउने समस्या समस्या छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् र समस्याबाट मुक्ति पाउनुहोस्
रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ ? सावधान रहनुहोस् डर लाग्दो तथ्य सार्वजनिक, विज्ञले दिए यस्तो चेतावनी
मनाङमा बलिउड चलचित्र ‘उचाइ’ छायाङ्कन, कोको छन् कलाकार ?
कोरोना महामारीका कारण सखिया नृत्यको रौनकता हराउदै
विजयादशमी : टीका थाप्ने प्रभावशाली समय बिहान १०ः०२ बजे